Intuiton, mubvunzo nemhinduro mutambo uyo unokoshesa zano redu | IPhone nhau
Iwe unofarira trivia mitambo? Mumhando iyi yemutambo tinogona kuratidza ruzivo rwedu, asi zvakadiniko kana isu tikawedzera diki zano kuhovha? Kana tikazviwedzera, iyo cocktail yaizodaidzwa Intuiton, mutambo watinogona kukwikwidzana nawo nevamwe vatambi kuti tione kuti ndiani anogona kuwana mibvunzo yakawanda zvakanaka uye, kune rimwe divi, kuratidza ndiani anokwanisa kugadzira zano rakanakisa rekubvisa vanopikisa.
Asi, chii icho icho kubvisa vapikisi? Zvakanaka, Intuiton haisi Seti yemibvunzo nemhinduro zvakajairika; Kune atove akati wandei erudzi irworwo muApp Store uye vanopedzisira vasisazopa chero chinhu chitsva. Mutambo mukuru mune ino positi, pamusoro pemibvunzo, unowedzera zvimwe zvinhu zvinozoita kuti zvese zvinyanye kunakidza, senge hupenyu hwatinofanira kuchengetedza kuti tisvike kwese kwatinogona kana kuyedza kuti vatinokwikwidzana navo varasikirwe.
1 Intuiton inosvitsa hupenyu kune trivia mitambo
2 Iko mukana we "kugumburwa", chikonzero chikuru chekupindwa muropa kwavo
Intuiton inosvitsa hupenyu kune trivia mitambo
Iyo Gameplay iri nyore pane painonzwika: kutanga nayo, isu tinoda vakwikwidzi kukwikwidza navo. Kuti tivawane, tinogona kutsvaga kuburikidza nevatinosangana navo, online kana kuvamirira kuti vatikoke (zvakakosha kuve nezviyeuchidzo zvinoshanda kana izvi zviri izvo zvatinoda). Kana tangogadzira kare boka revadzivisi, tichagadzirira kutanga mutambo.
Iyi mitambo, sekutaura kwatatove tataura kakawanda, mibvunzo nemhinduro. Sezvo zvingave zvakaoma kwazvo kana kusanyorova kuti mumwe nemumwe anyore mhinduro, Intuiton ichatipa mhinduro yemumwe mushandisi (ndokuti, 4 kana tiri 4) kubva kune mumwe mushandisi yaanofanira kusarudza imwe. Pamusoro pemhinduro imwe neimwe, avatar yemushandisi akaisarudza ichaonekwa, asi izvo hazvireve kuti hatigone kuisarudza. Uye, chinhu chinoshamisa kwazvo mumutambo werudzi urwu, imwe chete yemhinduro ichave isiriyo uye iyoyo ichave iri mhinduro yekuti, pakutanga, inoita kuti tirasikirwe neumwe we5 hupenyu hwatakatanga nawo mutambo.
Nekuremekedza hupenyu hupenyu, taizove nezvinotevera:
Mhinduro chaiyo: isu tinochengetedza hupenyu hwatinahwo panguva iyoyo.
Yakagovaniswa mhinduro (iyo imwechete iyo mumwe mushandisi akasarudza): isu ticharasikirwa nehafu yehupenyu.
Mhinduro isiriyo: ticharasikirwa nehupenyu.
Hatidi kupindura: ticharasikirwa nehupenyu.
Pakupera kwemutambo wega wega, ivo vanozogoverwa mibairo muchimiro chemari kuti tinogona kuchinjanisa nekumwe kugadzirisa. Iyo yekuvandudza ichave a Hupenyu hwembavha, yatinogona kuba nayo hupenyu kubva kune anokwikwidza, kana iyo Kuregedza, izvo zvichatibvumidza isu kuti tidzokere kumutambo isu tatova nekupererwa nehupenyu, chimwe chinhu chatichaita pamwe neiyo yakaenzana hupenyu seyemupikisi aive nehupenyu hwakawanda paakatibvisa.
Iko mukana we "kugumburwa", chikonzero chikuru chekupindwa muropa kwavo
Nekuti mitambo ndeyekufara uye nekupfuudza nguva, musiyano mukuru wemutambo uyu nevamwe wenyaya yakafanana ihwohwo hupenyu pamwe nemukana wekuzvibata, zvedu nevevakwikwidzi vedu. Kunyanya kana tichitamba neshamwari, hapana chinotinetsa kupfuura munhu watinozivana naye anotiitira basa rinotikuvadza mumutambo wechimwe chinhu. Asi kana mumwe munhu akatibira hupenyu kubva mumutambo, usakanganise nezvazvo kuti pachave neshoko rimwe chete rakaiswa mundangariro dzedu: Kutsiva. Mumutambo unotevera isu tichaedza kuita zvirinani kuve neiyo mukana wekuba hupenyu kubva kwatiri kwaari uye mutarise iye achiruma guruva. Asi, kana tikadaro, chatichange tichiita kuunza muswe padyo nehove iyo isingaregi kuzvitenderedza yega.
Chimwe chikamu chinonakidza cheIntuiton chiri kutora dzimwe njodzi - isu tatoziva kuti kune mhinduro nhatu dzinoshanda, asi dzimwe dzadzo dzichanzwisisika kupfuura dzimwe. Tichifunga izvi, zviri musimba redu kusarudza mhinduro ine musoro uye kuwana mamwe mavhoti ekurasikirwa nehafu yeupenyu nekuti mumwe mushandisi anosarudza mhinduro imwechete kana sarudza zvishoma zvine musoro zvemhinduro dzakarurama kuyedza kusaita chero munhu anopindura zvakafanana nezvatinoita uye nekuchengetedza hupenyu hwakazara. Sarudzo ndeyedu.
Kana iwe uchida mitambo yetrivhi, ini handisi kuzotumidza mamwe mazita kubva kuApp Store, asi isu tinofanirwa kubvuma kuti pakupedzisira zvese zvinosemesa. Kana iwe uchitsvaga mweya wekufema mweya, Intuiton iri senge makumi mashanu neshanu imwe nzira (Unoda kuve mamioneya?) Iyo inoridzwa nevashandisi vakati wandei, ine mhinduro imwe chete isiriyo uye mune hupenyu hwakakosha. Ndiani anopa zvakawanda?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Intuiton, mubvunzo nemhinduro mutambo uyo unokoshesa zano redu
WhatsApp inovandudzwa uye inokutendera iwe kutumira mameseji kunze kwenyika, uye zvimwe zvakawanda